हाम्रो हैन, राम्रो उमेदवार | Epradesh Today
Homeविचारहाम्रो हैन, राम्रो उमेदवार
हाम्रो हैन, राम्रो उमेदवार
दाङसहित देशभर अहिले प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, स्थानीय तह गरेर जनप्रतिनिधिको ५० पद रिक्त छ । दाङमा क्षेत्र नम्बर ३ (२) मा प्रदेशसभा सदस्य र घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ मा वडा अध्यक्षको पद गरी दुई पद रिक्तमा उपनिर्वाचन हुदैछ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर १४ गते उपनिर्वाचनको मितिसमेत तय गरिसकेको छ । मिति तोकिएसँगै दुई ठूला दल नेकपा र नेपाली कांग्रेसले चुनावी गतिविधि बढाउन थालेका छन् । दलहरुले उमेरदवारको छनोटको लागि आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् ।
दलभित्र पनि विभिन्न आफूलाई योग्य ठान्ने उमेरदवारहरु दलभित्र लविङ थालिसकेका छन् । दलहरु पनि चुनाव जित्न सक्ने उमेदवार छनौटमा लागेका छन् । दलभित्र विभिन्न तहका नेताहरु आकांक्षी देखिए पनि दक्ष र जनताको काम गर्ने उमेदवार छनौट गर्न दलहरु आन्तरिक तयारीमा जुटेका हुन् ।
खासगरी आगामी मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनमा दलका नेतृत्वले हाम्रोभन्दा पनि राम्रो उमेदवार छनौट गर्नुपर्ने कार्यकर्ताले अपेक्षा गरेका छन् । दाङमा दुई पदका लागि हुने उपनिर्वाचनमा दलहरुले कस्ता उमेदवार छनौट गर्नुपर्ला ?
राम्रोभन्दा पनि हाम्रो मान्छेलाई काखी च्याप्ने विगतको परम्परा अन्त्य होला यसपटकको उपनिर्वाचनमा ? चुनावी गतिविधिलाई दलहरुले कसरी लैजादै छन् कार्यकर्तामाझ ? जस्ता कुराकानीमा आधारित आजको राउण्ड टेवल सारसंक्षेप प्रस्तुत गरेका छौं ।
महासमिति सदस्यः नेपाली कांग्रेस
देश संघीय संरचनामा गएसँगै तीन तहका सरकार गठन भएका छन् । दाङ अहिले उपनिर्वाचनको चटारोमा छ । देशभर रिक्त रहेका ५० पदका लागि मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ ।
नेपाली जनताले फेरी आफ्नो अमुल्य मत प्रदान गरेर आफूले चाहेको जनप्रतिनिधि छनौट गर्ने अवसर दाङमा पनि आएको छ । यद्यपि एउटा जनप्रतिको दुखद् घटनाले यो समय आएको छ ।
दलका नेताहरु उमेदवार छनौट, चुनावी प्रचारप्रसारका लागि आन्तरिक तयारीमा जुटिसकेका छन् । सबै दलहरु नै चुनावी मत परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि गृहकार्यमा जुटेका छन् । उनीहरुले खासगरी अहिले आफ्ना चुनावी अभियान ग्रामीणस्तरमा सक्रिय बनाउन थालिसकेका छन् भने उमेदवार छनौटका लागि पनि पार्टीभित्र छलफल र बहस शुरु भइ रहेकै छ ।
पार्टीभित्र आफूलाई सक्षमको रुपमा चिनाउनु भएका व्यक्तिहरु उमेदवारका आकांक्षी देखिनु स्वभाविक पनि हो । आकांक्षीहरु उमेदवारको टिकट कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने आन्तरिक लविङमा लागिसकेको अवस्था पनि छ ।
आन्तरिक रुपमा पार्टीले अझैपनि उमेदवार छनौट गरि नसकेको अवस्थामा दक्ष, सक्षम र जनताले सजिलै आफ्नो अमुल्य मत दिने उमेदवार दलहरुले छनौट गर्नुपर्छ ।
विगतको अभ्यासलाई हेर्दाखेरी कतिपय अवस्थामा राम्रो भन्दा पनि हाम्रो उमेदवार छनौट गर्ने गरेको अवस्था पनि छ । जसले गर्दा पार्टीभित्र फुट र गुटको स्थिति सिर्जना भएका उदाहरण पनि थुप्रै भेटिन्छन् ।
मलाई के लाग्छ भने दलहरुले आगामी मंसिर १४ मा हुने उपनिर्वाचनमा आफ्नो उमेदवारलाई जनताका समस्यालाई आफ्नै समस्याका रुपमा लिने उमेदवार छनौट गर्न सक्नुपर्छ । पार्टीभित्र आकांक्षी देखिनु स्वभाविक पनि हो । किनभने सबैको लगानीले नै पार्टी उचाईमा पुगेको हुन्छ तर पार्टीको जो पनि जस्तो पनि उमेदवार छनौट ग¥यो भने आफ्नै पार्टीभित्र पनि समस्या सिर्जना गरिदिन्छ यसमा नेतृत्वले ध्यान दिनु पर्छ ।
कतिपय अवस्थामा जेष्ठता र वरिष्ठताका आधारमा पनि पार्टी नेतृत्वले टिकट दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । नेतृत्व सुविधा भोगीभन्दा पनि जनताका समस्यालाई सहीरुपमा समाधान गर्ने हुनुपर्छ ।
नागरिकले अहिले पनि सही नेतृत्व पाउन नसक्दा हैरानी खेप्नुपरेको छ । चुनावमा मत दियो तर पछि उसैले चिन्न नसक्ने परिस्थिति पनि आएको छ । अझ सक्षम नेतृत्व आफ्ना कार्यकर्ताभन्दा पनि समग्र जनताका समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ ।
पार्टीभित्र आकांक्षी देखिनु अपराध होइन्, विभिन्न तह र तप्काका नेतृत्वहरुको टिकट पाउने अपेक्षा हुन्छ तर सबैलाई टिकट दिन पनि असम्भव छ । पार्टीले समयमै सही नेतृत्व छनौट गर्नका लागि पार्टीभित्रै पनि व्यापक छलफल र वहस गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
म पनि काग्रेस पार्टीको तर्फबाट आकाक्षी छु । तर पार्टीले मैलाई नै उमेदवार छनौट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन् । पार्टीले जसलाई टिकट दिन्छ मेरो समर्थन हुन्छ तर यत्ति होकी पराजित हुने होइन जित्ने उमेदवार छनौट गर्नुपर्छ ।